Waa la Sugayey in ONLF … Ethiopia – Rasaasa News
Waa la Sugayey in ONLF … Ethiopia
Jijiga, Jul 24, 2018 – Warar hordhac ah oo laga soo xigtay xogahaya guud ee ONLF, waxay tibaaxayaan in ONLF ay ku baaqday qabashada “shirwayne qaran.” Shirwayne qaran marka la tibaaxo; waa shir u furan dhamaan bulshada, gogolna cidi u dhigto si looga wada xaajoodo arimo muhiim u ah bulshada.
Xoghayuhu, wax faahfaahin ah kama bixin, goobta lagu qabanayo, goorta la qabanayo, cida marti galinaysa, iyo meelaha ay ka imanayaan wufuuda ka qayb gali doona shirkaas.
Jabhada ONLF, waxaa dhawaan ugu soo dhamaaday magaalada Caasmara shirwaynihii 3aad ee Jabhada July 11, 2018, shirkan kii ka horeeyey waxaa la qabtay September 11, 1998.
Dalka Itoobiya muddo saddex sano ah, waxaa ka socday qalalaase siyaasadeed oo lagu diidanaa awooda xad dhaafka ah ee ururka Tigray People Liberation Front (TPLF), oo xukunka ka qabsatay 1991, dawladii shuuciga ahayd Mengistu Hailemariam.
TPLF, Waxay gabalka Soomaalida ka abuurtay ciidanka Liyu Police-ka 2007, kaas oo loo sameeyey in shacabka Soomaaliyeed kaga dhex saarto Jabhada ONLF. Liyu Police iyo Ismaamulka Soomaalida ee uu hogaamiye Cabdi Maxamuud Cumar (Cabdi Iley), waxay u gaysteen dadwaynaha Soomaaliyeed dhibaato baaxad wayne leh.
Ciidanka Liyu Police-ka iyo Ismaamulka Soomaalida markii dambe TPLF waxay u isticmaashay in ay kula dagaalanto shucuubta kale ee Ethiopia.
Ethiopia, waxay isku dayday sifa kasta oo ay ONLF, kaga adkaan karto. Gudaha waxay ka waday gumaad dibadana waxay ka waday heshiis ay doonaysay in ay ku soo xerayso ONLF.
February 11, 2018, waxaa Nairobi ka dhacay wadahadal u dhexeeyey xubno ONLF ah iyo saraakiil TPLF ah. In kasta oo kolkii dambe lagu kala tagay heshiis saxiix la,aan ah.
Arimahan Itoobiya ka socda, ma aha kuwa la saadaalin karo, wax kasta oo uu sheego R/wasaaraha Itoobiya lama qaadan karo, waxaana jira siyaasado qarsoon.
Gabalka Soomaalida maanta qiimo wayn ayuu u leeyahay dunida, sababtuna waa soo saarida shidaalka Ogaden. Itoobiya ma laha awood ay kaga faa,iidaysan karto shidaalka, hadii ayna helin heshiis dhab ah oo ay la gasho dadka Soomaalida ee gabalka dagan.
Sida ay xusayso taariikhada shidaalada laga soo saaro dhulalka la isku haysto wuxuu keenaa dagaalo, marka u dambaysan wuxuu galaa gacanta dadka dhulka leh.
Shidaalka Ogadenia, wuxuu la taariikh yahay shidaalka koonfurta Sudan. Halganka South Sudan waxaa kaga horeeya gabalka Ogaden. Dhibaatooyinka ka jira gabalka Ogaden waa mid aan aduunka ka qarsoonayn. Dawlada Shiinaha ayaa xoog ku soo saartay shidaalka koonfurta Sudan, kan Ogadeeniya waxaa xoog ku soo saaray Shiinaha. Waxaan isleeyahay shidaalka la soo saaray ee Ogadenia, wuxuu horseedayaa xornimada Soomalida gabalka dagta, oo leh hantida shidaalka.
Hogaaminta ONLF, waxay isugu jirtaa labo qaybood; qayb aaminsan in wax xoriyad ka yar ayna ummadu ku qancayn, qaar baa waxay aaminsan yihiin in xuquuq laga helo Itoobiya. Lama oga sida ay u kala tiro badan yihiin xubnaha ururka ONLF ee kala adag (hard liners).
Itoobiya, waxay daadinaysaa dabino siyaasadeed oo badan iyada oo raadinaysa saxiix ay ku sharciyeysato xadka iyo xoolaha gabalka. Hadii ay arintaasi u hirgashana, waxaa adkaan doonta mustaqbalka in dhulka Soomaalida ee ay Itoobiya haysato dood dambe ka timaado. Waayo waxaa harqin doona mawjada dad ah oo ka soo butaaca dhulka sare ee Itoobiya, kuwaas oo si sharci ah u qaadan doona tirada dadka dagan gabalka.
NEWS: US Announce $170 Mln in Humanitarian Assistance TO Displaced People in Ethiopia